‘हामी रोजगार, स्वोरोजगार र वैदेशिक रोजगारको लागि सहजीकरण गर्दिन्छौँ’ – Dhawalagiri Technical School
कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण आफुलाई पायक पर्ने विषयमा विद्यार्थीहरु भर्ना हुन नपाएको भन्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीईभीटीले चालु आर्थिक वर्षको शैक्षिक कार्यक्रमका लागि पुन भर्ना आहवान गरेको छ । डिप्लोमा तथा प्रिडिप्लोमा तहमा नयां शिक्षलयहरु तथा रिक्त रहेका सिटहरुमा विविध कारणले भर्ना फारम भर्न छुटेकाहरुको लागि आगामी मंसिर १५ सम्म शिक्षालयमा सम्पर्क गरी आवेदन फारम भर्न सकिने सीटीईभीटीले जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा सीटीईभीटीको आंगिक संस्था मुस्ताङको धवलागिरी प्राविधिक शिक्षालयका प्रमुख खड्ग बहादुर सुब्बासंग भर्ना अवधी थप गरिएको अवस्थामा विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने योजना के छ भनेर अम्बिका मगरले गरेको कुराकानी तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
सीटीईभीटीले भर्नाको अवधि थप गरेको यो अवधिमा विधार्थीलाई आकर्षित गर्नका लागि के योजना छ ?
गाँउघरमा छात्रवृत्तिमा पढेकाहरूले यस्तो छात्रवृत्ति पाइदो रहेछ भन्ने कुराहरू गर्दा रहेछन्। धेरै जनाले सोधेका पनि थिए र हामीले सबैजनाको फारम पनि भरेका छौँ। हाम्रो यो दुर्गम ठाँउ सस्तो छ अरू स्कूलको तुलनामा। हामी १८ महिनाको ८ हजार लिन्छौँ अरूमा एकडेढ लाख लिने रहेछ। होस्टलको सुबिधा सबै छ। खाना पनि सस्तो छ ४० रूपैयाँ छाक पर्छ मुस्ताङ जस्तो ठाँउमा। अन्य भन्दा यातायातको सुविधा राम्रो छ। गाडीबाट ओर्लेर १ मिनेट हिडेपछि स्कूलको कम्पाउण्ड आइहाल्छ। पठनपाठनको लागि पनि बन्द हड्तालहरू केही पनि हुँदैन मुस्ताङमा। हामी रोजगार, स्वोरोजगार र वैदेशिक रोजगारको लागि सहजीकरण गर्दिन्छौँ। पर्यटकिय क्षेत्रका विधार्थीहरू त होटलहरूले माग गरिरहेका छन् हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। कृषि र पशु विज्ञानका चाँही NGO र INGOहरू सँग हाम्रो साझेदारी छन् केही अफिसहरू, उहाँहरूलाई जनशक्ती चाहियो भने हामीसँग माग गर्नुहुन्छ अनि हामीले हाम्रो जनशक्ती पठाउछौँ।
विधार्थी भर्नामा यो वर्ष केही कठिनाई देखिएका छन्। यसलाई कसरी व्यावस्थापन गर्न योजनामा हुनुहुन्छ ?
फारम सबै अनलाइनबाट लिएका छौँ। अनलाइन मार्फत नै भर्ना पनि गरिसके विधार्थीहरूले। पुराना विधार्थीहरू पनि छन् र नयाँ विधार्थीहरू पनि छन्। यो स्कूल अवस्थित भएको ठाँउमा पनि अलि नजिक नजिक कोरोणा संक्रमण भैसकेपछि नयाँ ग्रुपलाई माघको १८ गतेबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। अनि पुरानो ग्रुपलाई मंसिरको २१ गतेबाट यहाँ ल्याएर भित्रै राखेर पठनपाठन सुरू गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। हामी पोखराबाट आउने विधार्थीहरूलाई सबै पोखरामा बोलाउछौँ र हाम्रो आफ्नै स्टाफ खटाएर हाम्रो स्टाफले एकैचोटि लिएर आउनुहुन्छ। बाग्लुङबाट आउने विधार्थीहरूलाई हामी बाग्लुङ अथवा म्याग्दीमा जम्मा गरेर त्यहाँबाट एउटा गाडीमा ल्याउछौँ। विधार्थी ल्याएर भित्रै राख्ने सल्लाह भएको छ स्थानिय निकाय र प्रशासन सँग त्यही अनुसार समन्वय गरेर कक्षा सञ्चालन गर्ने सोचमा छौँ।
यस अघिको भर्ना कार्यक्रममा विधार्थीको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ?
मुस्ताङ जिल्ला अलि दुर्गम ठाँउ। परिक्षा भैसकेपछि १ महिना बढि घर बस्नुपर्ने अनि फेरी पछि पढ्न आउनुपर्ने। त्यसले गर्दा अलि अवधि लामो भयो, प्रवेश परिक्षाको परिणाम भएको हप्तादिन मै कक्षा सञ्चालन भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा गरेका थिए। प्रवेश परिक्षाको लागि ५ वटा ठाँउमा हाम्रो केन्द्र हुन्छ। परिक्षा भएपछि परिणाम निकालेर अनि १ महिना पछि बोलाउथ्यौँ यहाँ, सीटीईभीटीको शैक्षिक सत्र तालिका पनि त्यही छ। अहिले अनलाइन मार्फत भैसकेपछि त्यसमा समस्या देखेका छैनौँ। कहिले आएर पढ्ने, कहिलेबाट कक्षा हुन्छ भन्ने कुरामा विधार्थीको चासो छ।
कोरोना संक्रमण जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा कक्षा संचालन कसरी गर्ने तयारी छ ?
घासा भन्ने ठाँउ मुस्ताङको प्रमुख सिमाना हो। त्यहाँ पनि जाँच हुँदो रहेछ। अलि शंकास्पद विधार्थी त्यहीबाट फर्किन्छन्। हामी प्रत्येक अविभावकलाई पनि सुचना गराउछौँ कि अलि अस्वस्थ छ, रूघाखोकीको लक्षण छ भने नपठाउनु होला, स्वस्थ छ रामै अवस्थामा छ भने मात्र पठानु होला भन्छौँ। यहाँ ल्याइसके पछि भित्रै छ हाम्रो क्वारेन्टाइन जस्तो, बाहिर निस्कन पर्दैन सबै कुरा भित्रै उपलब्ध हुन्छ। अनि ७ देखि १० दिन सम्म यहाँको स्थानिय प्रशासनले क्वारेन्टाइन राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अहिले हामीले त्यही गरिराछौँ। २० दिन अगाडि ल्याएर १४ दिन क्वारेन्टाइन राख्छौँ। आउने पुरानो विधार्थीहरूलाई पनि स्थानिय प्रशासन र जिल्ला प्रशासनले त्यही गर्नु भन्नु भएको छ। त्यही गर्ने प्रक्रियामा छौँ।